Okpomọkụ Ama Infrared China Manufacturers & Suppliers & Factory
Okpomọkụ Ama Infrared - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Okpomọkụ Ama Infrared)
• Na-enyere ahụ mmadụ aka site n'itinye maka okpomọkụ infrared. • Enweghi mmetụ nke electromagnetic si na ihe nkiri kpo oku. • N'iji ejiji ya, ọ dị mfe ịwụnye na njikere iji. • Enwere ike ịhọrọ ọkwa okpomọkụ dị gị mkpa maka nkasi obi gị. • Ngwa ngwa ma ọ bụ ngwa ngwa. Ike zuru oke • Na-emepụta ngọngọ ọjọọ....
Okpomọkụ Ama Infrared Igwe ọkụ na Infrared Na-ekpo ọkụ nke infrared Onyinye na-ekpo ọkụ infrared Sauna Na-ekpocha Ọkụ Na Infrared Uwe Okpomọkụ Ejiri Ike Okpomọkụ Na-akpo Ahụ Ike Ihe nkiri na-ekpo ọkụ nke infrared